Ukuncamisa Iintlanzi | Ngeentlanzi
Olu hlobo lweentlanzi lukwaziwa njenge Ukuphuza gourami, bangabosapho lweentlanzi iHelostomidae. Nangona ngoku banokufumaneka kulo naluphi na uhlobo lwe-aquarium kwihlabathi liphela, bazalelwa eIndiya, eThailand, eIndonesia naseMalaysia, abahlala emilanjeni enobuninzi bezityalo.
Ezi ntlanzi zibonakaliswa ngokuba nomzimba omile okweqanda kwaye uxinaniswe emacaleni, kwaye unemilebe eyomeleleyo kwaye eguqukayo esetyenziselwa ukulwa kunye nokondla.
Phakathi ukubamba iintlanzi Sinokufumana iindidi zasendle ezinombala otyheli oxutywe nohlaza kunye neentlanzi ezahlukeneyo zasemanzini ezinombala opinki ngakumbi nesilivere, nangona oku kokugqibela ngombala wesilivere kunqabile kakhulu kwaye kungaqhelekanga.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olu hlobo lweentlanzi lukummandla, kwaye banokulwa nezinye iintlanzi zohlobo olunye ukukhusela indawo yabo. Kulapho igama labo livela khona, kuba xa besilwa kwaye bekhusela indawo yabo benza njalo ngokuvula umlomo kunye nokuluma imilebe yezinye iintlanzi ezincamisayo, ke kubonakala ngathi bayamanga. Kodwa, inyani kukuba bayaluma imilomo ukuba bashiye omnye ngomlomo owenzakeleyo, kuba oku kuya kwenza ukuba kube nzima kubo ukondla kwaye baphele besweleka.
Ukuba ufuna ukuba nale hlobo intlanzi kwi-aquarium yakhoKuyacetyiswa ukuba uzibeke kunye nentlanzi ye-Helostoma temminckii kuba ziyintlanzi enoxolo, nangona kunjalo, ukuba zincinci, lumka kuba iintlanzi ezincamisayo zinokutya kwezi, nangona zizii-omnivores kwaye zitya izinambuzane.
Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuba i-aquarium yolu hlobo lweentlanzi kufuneka ibe ngaphezulu kweelitha ezili-100 zamanzi, ezihonjiswe ngezityalo ezomeleleyo kunye namatye. Kufanele ukuba ibe yindawo ye-aquarium enendawo eninzi yasimahla yeentlanzi zethu ezincamisayo ukudada kwaye ukuze ikwazi ukuhlala neentlanzi ezilinganayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Intlanzi ephuzayo
Ezi ntlanzi zingashiywa emanzini abandayo neeteleskopu zentlanzi, njlnjl…?
Intlanzi eMthubi ngombane